Funda malunga nabasebenzi bethu abaMangalisayo »IYunivesithi yaseHodges
Imfundo ePhakamileyo ifundiswa ziingcali ezifundisiweyo
IHodges U yeFakhalthi kunye nabasebenzi
IHodges U ibonelela ngemfundo yohlobo oluthile engenakufunyanwa naphina naphi na nokuba ufumana imfundo kwikhampasi, kwi-Intanethi, okanye kwifomathi edibeneyo. Ngoba? IFakhalthi yethu, iFakhalthi yoQeqesho, kunye nabasebenzi banenjongo enye - ukukunceda uphumelele! EHodges, siyayiqonda imiceli mngeni yabafundi abadala abanomsebenzi kunye noxanduva losapho. Kungenxa yoko le nto siguqukile ukuze sikunike izixhobo ozifunayo ukuze uphumelele kwezemfundo nakwikhondo lakho lomsebenzi.
Ii-Dean kwisikolo ngasinye kwisikolo sethu zizinikele kwimpumelelo yakho. Bathatha ixesha lokudibana nawe ukunceda ekoyiseni nayiphi na imiceli mngeni onokuba uhlangabezana nayo. Umgaqo-nkqubo ovulekileyo uthetha ukuba ngamnye kwiGosa lethu uyafikeleleka. Nceda welula isandla, nokuba ungazazisa. KwiYunivesithi yaseHodges, iiDeans zethu zifuna ukuba ufezekise iinjongo zakho zemfundo! Masikuncede apha endleleni.
Kunye namalungu ethu eFakhalthi, uya kufumana ubuchwephesha obuzimeleyo kunye nobuchwephesha bokubonelela obonelela ngemfundo yekholeji nganye ukuya kwenye. Ubungakanani beeklasi zethu ezincinci zenza ukuba kube lula ukufumana ingqalelo yomntu ngamnye ebalulekileyo ukuze ufikelele kwiinjongo zakho zemfundo kunye nekhondo lomsebenzi. Ukufunda kukuphumelela ebomini kwaye silapha ukukuxhasa njengoko imfuno yakho yolwazi oluqhubekayo ikhula. Kwaye ngenxa yokuba amalungu ethu obuhlakani eyunivesithi anamava kwicandelo abalifundisayo, uya kufunda ngaphezulu kwethiyori kwaye okuninzi okufundayo kunokusetyenziswa kwindawo okuyo ngoku.
Abasebenzi bethu balapha ngenxa yakho. Ukusuka kubabulisi bethu ukwamkelwa kuncedo lwezezimali kunye nabasebenzi beziko lamagqala ezempilo-sikufumene. Abasebenzi bethu balapha ukukunceda kwinqanaba ngalinye lendlela, nangaphaya kokuthweswa isidanga.
UkuKhangela kweZikhokelo zabasebenzi